Madaxweynaha Soomaaliya oo cambaareeyay Qarixii Huteel Central | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Madaxweynaha Soomaaliya oo cambaareeyay Qarixii Huteel Central
Madaxweynaha Soomaaliya oo cambaareeyay Qarixii Huteel Central
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyey weerarkii argagixiso ee waxashnimada ahaa ee maanta lagu qaadey mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho oo ay ku sugnaayen mas’uuliyiin iyo shacab intaba.
“Aad baan uga xumahay in kooxaha nabadda ka soo horjeeda ay mar kale dad Muslimiin ah oo waajibka salaadda Jimcaha gudanaya ay ku weerareen masjid hoteelka Central ku dhex yaalla. Ilaahay ha u naxariisto inta ku dhimatey, kuwa ku dhaawacmeyna waxaan Ilaah uga baryayaa inuu degdeg caafimaad buuxa u siiyo.”
Madaxweynaha ayaa sheegay in weerarkani aanu dib u dhac ku keeni Karin hawlaha dowladda iyo dadaalka nabada lagu sugayo, isla markaana la sii wadi doono dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada iyo kuwa kale ee ka soo horjeeda xasilooni ay Soomaaliya hesho.
“Waan sii wadeynaa dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Waxaana hubaa in weerarkan uu mar kale u caddeynayo shacabka Soomaaliyeed in kooxaha magaca diinta sida khaldan ugu gambanaya aysan wax xushmad ah u ahayn diinteena saliimka ee Islaamka ee nabadda ina fareysa, iyagoo dilaya dad Muslimiin ah oo ana waxba galabsan. Ciidammadeena amniga oo kaashanaya ciidammada nabad ilaalinta Midowga Afrika (AMISOM), iyo shacabka marnaba joojin maayaan dagaalka kooxahaasi ka dhanka ah, ilamaa Soomaaliya ay nabad buuxda ka hesho’’, ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu baaqey shacabka inay sii wadaan gacansiinta iyo la shaqeynta laamaha amniga
Previous articleRa’iisul Wasaare ku xigeenka iyo Wasiir Jangali oo Dhaawac Soo Gaaray
Next articleBal Maxay Galabsadeen oo loo Dilay?